Ayifeze izifiso zezwekazi laboHlanga i-AU eKigali - Bayede News
UMkhize emizamweni yokukhonga isibili kuNFP
Kuleli binza funda ukuthi umfoka Ngubane uthini ngomhlangano oqhubekayo eKigali nalokho athi akwenzeke
NJENGOKOHLELO, ingqungquthela yeNhlangano Yamazwe Ase-Africa (African Union) iqalile eKigali, eRwanda, kuleli sonto. Le ngqunguthela iqale ngomhla zili-10 kanti iyophela ngomhla zili-18, nxashane sekuhlangana oMengameli okuyibona okumele bathathe izinqumo. Le ngqungquthela ibalulekile ngoba phela iqondana nokuphela kwesikhathi sokuphatha seminyaka emine yalabo ababeqokwe ukuphatha iKhomishana ye-African Union (AU) ngowezi-2012. Ngamanye amazwi ke, inika ithuba lokuthi kubhekwe emuva, kucubungulwe indlela esihanjiwe kule minyaka emine kanye nemizamo esibe khona ephokophelele ukuphucula impilo yama-Afrika.
I-AU kulo nyaka wezi-2016, lungaphansi kwenqgikithi ethi ‘Unyaka wokubungaza amalungelo esintu ikakhulukazi nokuqhakambisa amalungelo abesimame’ okuyinto ebeyenzelwe ukuthi kuphakanyiswe, futhi kubhekisiswe ukuthi yini eyenziwayo emazweni ase-Afrika ukuze kuqhutshekwe nokuvikela amalungelo abesifazane, futhi kuphinde kuthathwe izinyathelo ezithize ukuze uma kubonakala ukuthi kuyaxega kule ntshisekelo kulungiswe. Lena yinqikithi ejule ngempela ngoba kohlale kuyichilo kithina singama Africa ukuthi iqhaza elibanjwe ngabesifazane emzileni yokuphathwa kwamazwe, kanye nokunye inganakwa. Kuyinto eyaziwayo futhi ukuthi kuvamile uma kunezimpi, kuye kube abesifazane abagcina sebexhashazwa, amalungelo abo kudlalwe ngawo. Kumele ngempela ukuthi ke izinkokheli zamawe ase-Africa, ziqhubeke nokulwa nezimo ezifana nalezi.
Uhlumaphuzu lwale ngqunqguthela luqukethe okuningi okumele kudingidwe, esizokuhlaziya ngamafuphi kulo mbhalo. Kodwa, ngaphambi kokuba sigxile kulokho, ake sikhe nje entweni eyodwa okuyiyo okungathi abaningi kabayihlaziyi bagxile kuyo. Sizobe asinhlanhlathi uma sithi kule ngqungquthela, umkhonto ujame enxebeni ngoba phela okunye okumele kwenziwe ukuqokwa kwabaphathi abasha be-AU okuyibona okumele bafeze izinqumo zale nhlangano kule minyaka emine ezayo. Laba baholi abasha kuhlanganisa nalowo okumele abe uSihlalo, emva kokuba owayeqokwe abaholi baseNingizimu ye-Afrika, uDkt uNkosazana Dlamini-Zuma, ubesevele eseshilo ukuthi angeke abuyele ihlandla lesibili ekubeni uSihlalo. Uma sithatha ukubheka singathi kulo mcimbi wokubekwa kwabaholi abasha, isiyobanjwa eshone nayo ngoba maningana amagama aphakanyisiwe ukuthatha indawo kaSihlalo. Kodwa angeke sikugweme ukuthi lolu khetho kungase lungenzeki, ngoba besesifakiwe isicelo ngamazwe aseNtshonalanga ye-Afrika ukuthi ake kuhlehliswe ukukhetha abaholi abasha kodwa kwenziwe ngengqunguthela ezayo ezoba ngoMasingana wezi-2017. Uma lesi siphakamiso sivunywa, kuchaza ukuthi labo vele abakhona komele baqhubeke baphathe ubuholi.
Okumele sikuphawule ukuthi asingavumeli le nto yobuholi kube yiyo esigxila kuyona kakhulu. Lokhu sikusho ngoba ziningi izingqinamba esibhekene nazo singabantu boHlanga, okungamele sizishaye indiva ngenxa yalesi simo. Kuyoba kubi ukuthi oMengameli uma behlangana, bachithe isikhathi kudingidwa ukuthi ubani ozophatha, ngoba lokho kobenza sibathathe njengabaholi abangaboni ukuthi yini ebaluleke ngempela kithina ma-Afrika. Futhi ke, kumele sikusho ukuthi akumele sikhathazeke ngokuthi ubani ozothatha izintambo uma uDkt uNkosazana Dlamini-Zuma eshiya, kunalokho kumele siphoqe oMengameli ukuthi bavumelane ngokuthi noma ngabe ubani oyothatha izintambo komele aqhube ngendlela ezothuthukisa izwekazi i-Afrika, alandele izinqumo nemigomo evele esibekiwe. Isibonelo, njengoba uHlumaphuzu lowezi-2063 (Agenda 2063) lusanda kushicelelwa, kubalulekile ukuthi noma ubani oyothatha izintambo zokuba uSihlalo komele aqhubeke lapho abakade bephethe begcine khona ngokuthi kuqhutshekwe nalo lolu Hlumaphuzu lowezi-2063! Lokhu sikugcizelela ngoba uma sithatha nje ukubheka imihlahlandlela efana noNEPAD, ayisenayo le nhlokomo efana neyayinayo mhla iqalwa eminyakeni angamashumi edlule; esinye sezizathu zalokho ukuthi mhlasimbe yingoba abaholi okuyibona abasebenza ukubheka oNEPAD abasekho. Nanoma isaphathwa iNEPAD, kodwa akusafani nangalesi sikhathi esesadlula. Ngamanye amazwi ke, kumele kule ngqungquthela kugwenywe ukuthi ukushiya kwalaba abakhona manje kwenze ukuthi uHlumaphuzu lowezi-2063 lunganakwa. Ngakolunye uhlangothi, amazwe onke ase-Afrika kumele aqhubeke nokuthi lolu Hlumaphuzu lowezi-2063 lube ngolunye lwezinhlelo zohulumeni, futhi luqhakanjiswe emazweni onke ase-Afrika. Njengoba sikhuluma nje, amazwe angama-34 kuphela asethathe izinyathelo ezibonakalayo ukuze uHlumaphuzu lwezi-2063 luqhakanjiswe emazweni ayo, lawa ke asele kumele agqugquzelwe ngokunjalo.
Ngaphandle ke kwalokhu, kuningi okumele kudingidwe njengoba abaphathi behlangene. Okokuqala, yisinqumo esizothathwa sokuqaliswa kweCommon African Passport (CAP), okuyisinyathelo abaholi bezwekazi abasibona njengesibalulekile uma sifuna ukuthi kube khona intuthuko, nokuhwebelana ngaphandle kwezihibe ezwenikazi lase-Afrika. Noma lokhu sikubona kuyisinyathelo esihle, enye yemibuzo esingayibuza ukuthi, yini lena eyenza abaholi, njengalaba nje baseningizimu ye-Afrika, bacabange ukuthi izosebenza le CAP, uma bona behlulekile ukufeza zonke izinqumo ababezithathe eminyakeni eminingi esiyadlula mhla besayinda isivumelwano esibizwa phecelezi ngeProtocol on Facilitation of Free Movement of Persons? Esikuphawulayo lapha ukuthi, injongo yalesi sinyathelo iyezwakala, kodwa kumele kube nesiqiniseko sokuthi, angeke kube yinto ezohlala nje, kodwa izoqhubeka imizamo yokuthi ngempela leli phupho liphumelele.
Okunye futhi esingethemba ukuthi kuzoke kuhlaziywe ukuthi kungabe le ntshisekelo ye-Afrika yokwakha ubumbano olungenazihibe kwezomnotho, isengaqhubeka yini ngendlela ehlelekile? Lokhu kumele kudingidwe ngoba phela nakhu izwekazi i-Europe, libhekene nensambatheka emva kokuthi iBritain iqome ukuhoxa ku-European Union (EU). Kumele ukuthi, oMengameli base-Afrika, bayibheke ngeso elibukhali le ukuze sazi ukuthi yikuphi thina esingakugwema okwehlule izwekazi lase-Europe ukuthi bakugweme mhlazane benza ubumbano lwabo. Ingempela singama-Afrika, okubalulekile yikho ukuthi i-Afrika ibumbane ikakhuluzaki kwezommnotho, ngoba ukuthuthuka kwezwekazi angeke kwenzeke uma sisalokhu sibheke ekutheni siyothembela kwamanye amazwekazi. Izinqumo ezizoqhubeka zithathwe ukuze kuyiwe phambili nemizamo yokuthi kuvuleke, kudlondlobale, futhi kwenziwe ukuthi kubelula ukuhwebelana zibaluleke kakhulu. I-Afrika ngeke ikwazi ukuqeda ububha obubhekene nabantu uma ingathathi izinyathelo ezibanzi ukuthi iqinise ukuhwebelana.
Enye yezinto ezodingidwa, futhi vele ehlale isohlelweni lwengqungquthela eyemizamo eyenziwayo ukuze kube khona ukuthula noxolo eAfrika. Lena ke yoxolo nokuthula ezwenikazi lethu ibalulekile ngoba enye yezinqumo ezathathwa phambilini sathi kumele senze konke okusemandleni ethu ukuze singadluliseli ijoka lezi zimpi nodweshu e-Afrika ezizukulwaneni ezizayo. Ihlangana nje i-AU, amazwe anjengoSouth Sudan ibambene phezulu, izakhamuzi zakhona zigubuzelwe yifu elimnyama. Imizamo ebiyenziwe ukudala uxolo eSouth Sudan, egcine ngokuthi kusayindwe isivumelwano ngonyaka odlule, isivumelwano ebesekuqalwa nje ukuthi sifezeke engathi isiyashabalala. Inqgunqguthela kumele ike ikufakele izibuko lokhu, engathithi sekuba yimpicabadala ukuthi yini ngempela lena eyenza laba baholi ababili, uMengameli uSalva Kiir, neSekela uMengameli uRiek Machar, abaqhamuka eqenjini elilodwa iSouth Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), behluleke ukuphatha izintambo zombuso ngendlela ezokwenza ukuthi abantu baseSouth Sudan, osekuphele iminyaka behlezi phansi kwengcindezi bangakutholi ukuphumula. Nezinye ke izimo ezifana noBurundi,i Central African Republic (CAR), iSomalia, zizodingidwa.
Esondelene kakhulu nale yokuthula noxolo e-Afrika, intshisekelo eyenziwa i-AU ukuthi akungenelele thina kakhulu ekutheni sisebenzise izimali zethu ukudala uxolo e-Afrika, ngoba le nto yokuthi sithembele kwabangaphandle iyasithunaza isithunzi sethu singama-Afrika. Asikho nesincane isidingo sokuthi ukuze i-Afrika ikwazi ukwakha uxolo emazweni ahlukahlukene ilokhu ilinda abangaphandle ukuthi basinikeze izimali, ngoba lokhu kudala ukuthi kugcine sekwenziwa izinto ngentando yabo.
Okumele kusivusele ithemba akuzona izingqungquthela nje! Kepha indima okumele iqathwe abaholi bethu ekufezeni izinqumo ezithathwayo baphinde benze ngendlela ukuze baphonsa ekutheni le mpicabadala yokuthi izwekazi lethu lithi linothile, linakho konke, kepha izakhamuzi zalo zihlwempu, iyophela!
Bayede News Jul 15, 2016